Botnet Inotadza Sei Makombiyuta Yenyu? - Semalt
Oliver King, the Semalt Mutevedzeri weVatengi vanobudirira, anotaura kuti zvirwere zve botnet zvakapararira pakati pemakombiyuta evanhu, kunyanya muChina nekuUnited States. Kunyange zvazvo mamwe mabhota ane mashomanana mashomanana, mamwe anogona kukurira mumamiriyoni emichina pasi rese. Botnets inotarisira kunyengedza vashandisi kuti vape mapurogiramu anotyisa kana mavhairusi uye kuvamanikidza kuti vatsinhanise zvibvumirano zvakabatana kana mavhidhiyo angangodaro ane utachiona hwemarware. Iyo inozoita se Trojan horse uye inobvumira vashandisi kuwana ruzivo rwe data yako uye ruzivo rwevamwe. Vanokuvadza vanoshandisa kombiyuta yenyu pachavo kuita mabasa akasiyana-siyana uye vanoita zvekupara mhosva, utsotsi, uye kuipa kwepanyika - herramientas seo para wordpress help.
Mune zvimwe zviitiko, kombiyuta yako kana foni yako inogona kutapukirwa ne botnet kana malware isingakubvumiri kutora mafaira akakodzera uye nekudzivirira kuti urege kuzarura mawebsite ako aunoda. Bhokneteni iyi inhare yekombiyuta inotapukirwa nepurojekiti chaiyo yemarware kana kuti yakaipa. Sangano iri rinotungamirirwa nevechitatu kana kuti nhengo yekunze. Rega ini pano ndikuudze kuti vatenzi ve botnets vanoshandisa kombiyuta yako kuti vape ruzivo rwekadhi rechikwereti, kutumira spam emails, kuita kuti basa rirwiswe kune nzvimbo dzakasiyana, uye kuita nharo dzekupengesa munhamba huru..
Nzira yekuona sei zvirwere zvemarware?
Paunenge uchiongorora shanduro yako neine antivirus kana anti-malware program, unofanira kutanga utadzivirira zvirwere zvose. Ichokwadi ndechokuti zvizhinji zvezvirongwa hazvina chazvinobatsira uye hazvikwanisi kugara nehuwandu hwehupfumi nehutambo hwekutengesa. Dzimwe nguva, nheyo dzezvinhu zvakaipa zvinowanikwa muwebsite yako pasina ruzivo rwako. Kana uine kombiyuta, unofanirwa kuvandudza web browser yako kana kushandura system nguva dzose. Zvakanaka kuisa Purogiramu Inokuvadza, yakakurudzirwa nehuwandu hwemanyori kune vatengi vavo pasi pose. Kana kombiyuta yako iri kuita zvayo zvishoma nezvishoma, iwe unogona kuve wakagadzirirwa mabhota, uye mikana ndeyokuti ruzivo rwekadhi rako rechikwereti richabiwa.
Nzira yekudzivirira sei botnet zvirwere?
Kunze kwekushanda nguva dzose uye zvirongwa zvehutachiona, iwe unofanirwa kutora matanho matsvene kuti uve nechokwadi chekuchengeteka kwako nekuchengetedzwa kwepaIndaneti. Chinhu chokutanga chaunofanira kuita ndechokusarudza mazita evakadzi uye mapepa. Iva nechokwadi chekuti chengetedza zvirongwa zvako zvepachivande zvishoma zuva rega rega nekuvandudza zvirongwa kamwe kana kaviri pavhiki. Iwe haufaniri kuvhara moto moto paunenge uchishanda paIndaneti uye uchitarisa mawebsite adzo. Nyanzvi dzinofunga kuti botnets inogona kuvhara kombiyuta kana chifoni chinoshandiswa mumaminitsi mashoma mashanu. Nokudaro, iwe unofanirwa kuchenjerera pamapeji ewebhu uye mabloggi waunoshanyira. Paunenge uchishandisa iyo internet, haufaniri kudarika pane zvisizvo zvisingazivikanwi uye zvinyorwa zvemailinimi, usakodhura software nemapurogiramu kubva pawebsite dzisingazivikanwe kana dzisiri pamutemo, uye shandisai kifaa chako nguva dzose.